UNikolai Demidov, (umculi). Biography, empilweni yakho
Nikolay Demidov - abanamakhono abasha Russian umlingisi, umculi nomqambi wezingoma, uhamba ngempumelelo endleleni nodumo. Yena kancane kuka-20, kodwa kakade uye wakwazi ukufeza phezulu kakhulu emizamweni yabo okudala. Insizwa ubhala umculo isosha esihlatshelelwayo, wenza nawo bodumo imincintiswano international kanye imiklomelo wawina. Ngaphezu kwalokho, Nikolay Demidov ungumnikazi yokuqopha sakhe, lapho usebenza nge abaculi, kuyasiza bazithola yezinye izingcweti. Ngisho Nicholas wavela ezithombeni, wabhala ingoma for the uchungechunge TV engakutholi ukhathele ukuba bahlanganyele self-ngcono. Le nsizwa enezinto eziningi imfundo ephakeme emikhakheni professional ehlukahlukene namanje akagcini lapho, namuhla inikeza amandla umlingisi kokuthola diploma.
Umsebenzi wakhe Nikolay Demidov waqala njengoba ilungu "Dream". Ngo 2003-2004, wayedlala endaweni band njengoba nomthofu umculi kanye keyboardist, bese, uzizwa amandla amakhulu, unqume ukwenza i-career solo. nensizwa ithalente emvumela ukuba aqambe izingoma yokuthi kwamandla umlethe impumelelo kanye nokuqashelwa. Ngo-2005, Channel Okokuqala yamemezela evulekile sokungena izicelo iqhaza emncintiswaneni "Eurovision". Nikolay Demidov ithumela idatha yayo kanye ingoma ebhalwe ngesiNgisi, - Umehluko. Imiphumela Ukuvota amusa phambili futhi wabavulela indlela yokuya iqhaza ehlonishwayo futhi ethandwa namanye amazwe.
Ngemva ekhuluma emcimbini "Eurovision" UNikolai Demidov uthola isimemo emncintiswaneni "Wave entsha". Ngo Jurmala yena kufanele sathola indondo ekhethekile okuthiwa "okufanelekelayo" ngoba ukusebenza iculo abaculi abadumile bendawo, kanye Umehluko yabo. A emnandi iphimbo engasenathonya, kukhanya kwangaphakathi okulethwa uNicholas, amhambise phambidlana endleleni eya empumelelweni nokubonwa.
Film amaphrojekthi iqhaza Nicholas
Abalandeli nabo bayazi ukuthi UNikolai Demidov - umlingisi. Le ndlela entsha yokuphila futhi kuletha insizwa eziningi imizwelo eyakhayo futhi izenzakalo ezithakazelisayo. "Ukuzibulala," "Isinyathelo Thenga Isinyathelo" "Mina" - movie ne UNicholas. Wabe esenza uchungechunge TV sici amafilimu, ezama yena indima nombhali ingoma kuya ochungechungeni TV. "Ukubuya Mukhtar", "Uthando nezinye izincwadi ezivamile" - amaphrojekthi ifilimu lapho izingoma umsindo ebhaliwe ikakhulukazi ngabo uNicholas. Umculo kubagijimi ejabulisayo Sochi-2014 sidalwe uNicholas ezilotshwe studio wakhe.
Nikolay Demidov - Umculi, umqambi, umlingisi, imbongi - ijubane okunokufutheka ukuphila phakathi ukuqopha, amakhonsathi, kwenta kanye isikhathi ozosichitha lapho uya uthole imfundo ephakeme. Ngaphezu kwalokho, hhayi elilodwa. Kusukela namuhla, uNicholas has amadiploma eziningana. It has imfundo kwezomnotho, ngokolimi Ukukhiqiza. Moscow State Construction University, State University of Management ahlelwe biography of Nicholas phakathi kwabo kuphelile izikhungo zemfundo ephakeme. Diploma Interpreter futhi insizwa, kodwa okwamanje nguye amakhosi mkhakha esebenza ukwenza kumafilimu kakade efanele. Eminyakeni embalwa yokuphila kwakhe uNikolai wachitha eMpumalanga, ekutholeni ukuhlakanipha namandla angokomzwelo. Namuhla, udonsa eziningi kusukela zathola okuhlangenwe nakho lapho, futhi ufuna olunye inhlahla endleleni yabo.
Nikolay Demidov washada. Ubudala lomuntu abasha uyeza baphendukela, lapho indoda idinga ukuqala umndeni. Ngo ingxoxo yakhe Nicholas uyavuma ukuthi has kancane kuphela isinyathelo esiwujuqu kuyilapho ayengenza okuguqula ukuphila kwakhe ukuze banake umndeni, futhi umsebenzi. Kodwa namuhla phakathi Bachelors futhi UNikolai Demidov. Umlando wakhe kuhlanganisa ubuhlobo eside nge umculi osemusha Maria Devyatova. Lo mbhangqwana wahlala ndawonye iminyaka eminingi, kodwa umshado wabo isiphelile, ngeke kuphele yini. Izinsizwa ehlukana phakathi, bahamba ngulowo lalowo emisebenzini yabo ngokwehlukana. Ngo abesifazane UNikolai uyakwazisa ukuthobeka, a isizotha ezithile. Lezi zimfanelo, Iyobeka iyahola lapho ekhetha intombi aphile esikhathini esizayo. Ngokuhambisana incazelo yegama elithi Russian "ushadile" abesifazane kufanele iziphathe ngesizotha, ngokuba "ngoba" indoda yakhe.
Self-ukuthuthukiswa kanye abaphelele ngokomoya
I abasha futhi abanamakhono umqambi, umculi kanye umlingisi wahlanganyela hhayi kuphela ekuthuthukiseni amakhono abo engqondo, futhi kakhulu, kodwa futhi eziningi isikhathi esisisebenzisela okuthuthuka ngokomoya. Yoga amakilasi zifakwe ohlelweni ayimpoqo, okuyinto yakhelwe onguye UNicholas. ukuqeqeshwa kwansuku umvumele ukuba uzizwe kangcono ngokwengqondo nangokomzimba. UNikolai abaqhuba indlela yokuphila imifino, ukungcola emzimbeni ubuthi. Zonke izindlela self-ukuthuthukiswa, waletha ezivela eMpumalanga. Kusukela Nicholas efanayo uvele izilungiselelo eziningi zangaphakathi ukuthi anikeze izimpendulo ezahlukene zemibuzo yokuphila eyinkimbinkimbi futhi usize le nsizwa ukuqonda izimo ezivelayo endleleni yakhe ngendlela efanele, futhi wenze izinqumo ezifanele.
Iqhaza abadlali - "Mission: Impossible isizwe elinamandla"
Umlingisi Stiven Dilleyn: Filmography, biography, izithombe
Abadlali abanekhono. "Indlalifa yowesifazane Russian" - uchungechunge enkulu
Abalingiswa "South Park": otvyaznyh ezine
Umlingisikazi Natalia Zaschipina: Biography, umndeni kanye nomsebenzi
Melodrama "syndrome kweswela." Abalingisi kanye izindima
Smartphone Acer Liquid Jade Z: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Ukulungisa ukushisa isibhamu ngezandla
Hairstyle "Babette": isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izithombe
Bertolt Brecht: Biography, umlando wokuphila, nobuciko kanye izincwadi ezingcono kakhulu
Ihhotela Dimitrios Village Beach Resort Spa 4 * (eKrethe, eGrisi.): Incazelo ye izinombolo, isithombe, abahambi Izibuyekezo
Womuntu bio-amandla, kanye nokuqinisa amandla izikhungo
Ngubani umholi? Ukubona i-umholi wezombangazwe umsebenzi
I-Linen canal: izici eziyisisekelo nokucaciswa
Darya Mikhailova: Biography, Filmography, empilweni yakho